Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Federal College Of Producer Inspection na echekwa Ngwaahịa Technology si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Ụlọ ọrụ Federal College nke Nyocha na Nzụkọ Ahịa Ngwaahịa
Ụlọ ọrụ Federal College nke Nyocha na Nzụkọ Ahịa Ngwaahịa
Kwụsị ahịa ahịa Nigeria na ndị ya - Gọvanọ Fayose gwara President Buhari
Gomishọchị Gọọmenti Ekiti, Mr Ayodele Fayose, akpọwo ndị ntorobịa nọ na Nigeria igosi President Muhammadu Buhari na ha adịghị umengwụ na ndị na-agụghị akwụkwọ site na ịkwado ya na 2019, na-ekwu; "Ọ na-ewute na Onyeisi ahụ nwere ike ịkọwa ndị ntorobịa nọ na Naijiria, ndị na-agbalịsi ike ime ka ndụ dịrị ndụ dị ka ndị umengwụ."
2019: Ex-Minister Ihenacho kwere nkwa inye aka APGA iji merie Imo
Onye isi ochichi gọọmentị nke All Progressive Grand Alliance (APGA) na Imo State, Captain Emmanuel Ihenacho (rtd), kwere nkwa inye aka na mmeri na 2019 site na iji ahụmahụ ya zukọtara na 2015 mgbe ọ nọ na-akwado gọọmenti kama ọ bụ Gọvanọ Rochas Okorocha.
Minista Chris Ngige na-agba ndi otu nchịkwa ọrụ aka iji kwadoo ọrụ
Minista na-arụ ọrụ na Employment, Sen. Chris Ngige, agwala ndị isi obodo na-ahụ maka ịmepụta ọrụ iji nweta ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ na Nigeria.
NNPC: Usoro akuku AKK ga emeziwanye mmepe aku na uba Naijiria
Ajaokuta, Kaduna, pipeline nke Kano ma oburu na akppo AKK iji chebe nchedo ike nke mba ahu ma mee dika ihe ndi ozo iji kpalite mmepe mmepe ulo oru na ime ka oru ugbo n'uwa.